Mogadishu Journal » Mas’uuliyiinta Ahlu Sunna oo faah faahin ka bixiyay talaabada xoogaga Ahlu Sunna loogu biiriyay dowladda federaalka
Mjournal : — Mas’uuliyiinta maamulka Ahlu Sunna Waljameeca ee gobolka Galguduud ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay talaabo xoogagga Ahlu Sunna Waljameeca loogu biiriyay dowladda federaalka Soomaaliya.
Sheekh Ibraahim Xassan Guureeye oo ka mid ah saraakiisha sar sare ee Ahlu Sunna Waljameecay ayaa sheegay in arintan ay la xiriirto dhaqan gelinta hishiiskii ay wada gaareen dowladda federaalka iyo maamulka ahlu sunna bilowgii sanadkan.
Sheekh Ibraahim Guureeye ayaa intaa ku darray in ciidamada Ahlu Sunna ay hoostagi doonaan qaybta 21-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dib u hawlgalinteeda ay xiligan ka socoto gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya,wuxuuna xusay in ciidankaasi uu ka xil wareegay maamulka ahlu sunna waljamaaca.
”Ahlu Sunna Waljameeca siweyn ayeey u taageersan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya, wada shaqeyn buuxda ayaa ka dhaxeeysa, sidaa daraadeed wixii xiligan ka danbeeyay xoogagga Ahlu Sunna waxaa ay si toos ah u soo tagi doonaan taliska ciidamada dowladda,” ayuu yiri Sheekh Ibraahim Guureeye.
Magaalada Dhuusa-mareeb ee gobolka Galguduud waxaa ku sugan saraakiil ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo uu horkacayo abaanduulaha ciidamada Jen C/risaaq Khaliif Cilmi oo xariga ka jira xerada 21-aad ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Maamulka Ahlu Sunna Waljameeca ayaa marar badan oo hore ku eedeeyay dowladda dhexe in aysan fulin hishiisyo ballan-qaadyo ay horay u galeen, laakiin dib u howlgalinta xeradii 21-aad ee degmada Dhuusa-mareeb ayaa waxaa siweyn u soo dhaweeyay mas’uuliyiinta Ahlu Sunna